कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी नेपाल आफैले उत्पात्दन गर्ने । – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी नेपाल आफैले उत्पात्दन गर्ने ।
कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी नेपाल आफैले उत्पात्दन गर्ने ।
बिबिसी विश्यव्यापी महाम्री कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म कुनै ठोष उपचार पत्ता लागिसकेको छैन । तर यतिबेला को’रोनाभाइरस सङ्क्रमणको उपचारमा उपयोगी हुने भन्दै विश्वभरि नै अहिले औ’लो रो’गको नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने हाइड्रोक्सीक्लोरिकिन औ’षधि माग बढिरहेको छ।
केहि दिन अगाडी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत सरकारसँग औलोको लागि प्रयोग हुने हाइड्रोक्सीक्लोरिकिन औषधि अमेरिका पठाइदिन आग्रह गरेका थिए। ट्रम्पले यो औषधि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका लागि महत्वपूर्ण साबित हुन सक्ने भन्दै भारतसँग सो औषधिको माग गरेका हुन् ।
ट्रम्पको भनाइपश्चात् यो औषधिको माग धेरै बढेको विवरण आएका छन्। औषधि पसलमा यसको अभाव हुन थालेको बीबीसीले जनाएको छ । विभिन्न देशका सरकारहरूले यो औ’षधिको जोहो गर्न थालेका छन्।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन भारतमा औलोको उपचारको लागि निर्मित एक पुरानो र सस्तो औषधी हो । कोरोनाको बढ्दो संक्रमणको बीचमा, यस देशका स्वास्थ्यकर्मीहरूले यस औषधिलाई एन्टी–भाइरलको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । भारत सरकारले गत महिना हाइड्रोक्साइक्लोरोक्विनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
विश्वभर नै हाइड्रोक्सी क्लोरिकिन औषधिको सबैभन्दा ठूलो निर्माता भारत हो ।भारतले यो कोरोना भाइरसको महामारी बीच आफुलाई नै आवश्यकता पर्न सक्ने भन्दै यसको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । तर अहिले भारतको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ औ’लोको सहित केही औ’षधिको निर्यातलाई आंशिक खुला गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
त्यसलगत्तै भारतमा विपक्षी नेताहरूसहित कतिपयले सरकारले आफ्नै देशलाई पर्याप्त औ’षधि भए नभएको टुंगो नलागी निर्यात खुलाएको भन्दै वि’रोध जनाएका छन्। विदेश मन्त्रालयले चाहिँ त्यस विषयको यकिन गरेर नै आंशिकरूपमा निर्यात खोलिएको जनाएको छ।
विश्वभरि उच्च माग र चर्चामा रहेको औलोका लागि प्रयोग हुने उक्त औ’षधिको नेपालमा भने कति उत्पादन र मौज्दात रहेको छ त?
औ’षधि उत्पादकहरूले जनाए अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालका तीनवटा उद्योगले औ’लो रो’गका लागि प्रयोग हुने सो औ’षधि उत्पादन गरिरहेका छन्।
एसोशिएसन अफ फा’र्मस्युटिकल प्रो’डक्टस् अफ नेपाल (ए’प्पोन) का अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले भने, “नेपालमा हाल तीन उद्योगहरूले यो ‍औ’षधि उत्पादन गरिरहेका छन्।
“उनीहरूसँग पाँचदेखि सात लाखवटा सम्म ट्या’ब्लेट बनाउन सक्ने कच्चा पदार्थ रहेको छ। त्यो भनेको ५० हजारदेखि ६० हजार बि’रामीका लागि पुग्ने मौ’ज्दात हो।” तर अहिले विश्वभरि नै क’च्चा पदार्थको भाउ बढेकाले उ’द्योगीहरूले थप कच्चा पदार्थ नल्याएको उनले बताए।
उनले भने “भोलि बि’रामी धेरै बढेर थप उत्पादन गर्नुपर्दा पनि उद्योगीहरू तयार रहेका छन् तर त्यसका लागि कच्चा पदार्थ ल्याउने वातावरण भने सरकारले तयार पारिदिनुपर्छ।”
देउराली जनता फा’र्मस्युटिकल प्रालि, क्यू’मेड फ’र्मुलेशन प्राली तथा वीरगन्जस्थित मारुती फ’र्मा प्रालिले हा’इड्रक्सीक्लोरक्वाईन वा ए’चसीओएस भनिने औलोको सो औ’षधि उत्पादन गर्दै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
कतिपय उद्योगीले केही मात्रामा उक्त औ’षधि को’भिड-१९ को उपचारका लागि सरकारलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घो’षणा पनि गरेका छन्।
देउराली जनता फा’र्मस्युटिकलले उक्त औ’षधिको चार लाख ट्या’ब्लेट सरकारलाई सहयोग स्वरूप दिने घो’षणा गरिसकेको छ। कम्पनीका सञ्चालक हरिभक्त शर्माले सरकारलाई उक्त औ’षधि दिनका लागि पत्राचार पनि गरिसकेको जानकारी दिए।
औ’षधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार नेपालमा उत्पादन गर्ने तीन कम्पनीबाहेक अन्य दुई कम्पनीले विदेशबाट पनि उक्त औ’षधि आयात गरिरहेका छन्।
हाल नेपालमा भैरहेको औषधीको उत्पादक र आयातकर्ताहरूसँग भएको मौ’ज्दात हेर्दा अहिले नेपालमा करिब नौ लाख ट्या’ब्लेटको वन्दोवस्त भईसकेको उनले जानकारी दिए।
च्याम्पियन अफ ह्युमन अचिभमन्ट मेमोरी रेकर्ड कायम गर्ने शाहीलाई कर्णाली सरकारको २ लाख पुरस्कार
काठमाण्डुबाट घर जानुप-यो ? यी ठाउँमा पाइन्छन् गाडी
दसौंको दिन आयो दु:खद खबर:कोरोनाबाट आमाछोरीको मृ’त्यु